Dheuteronomio 31 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
31 Zvino Mosesi akaenda, akataura mashoko aya kuvaIsraeri vose 2 akati kwavari: “Nhasi ndava nemakore zana nemakumi maviri.+ Handichabvumirwizve kubuda nokupinda,+ Jehovha zvaakati kwandiri, ‘Hauzoyambuki Jodhani urwu.’+ 3 Jehovha Mwari wako ndiye achayambuka ari pamberi pako.+ Iye achatsakatisa marudzi aya pamberi pako, uye unofanira kuadzinga.+ Joshua ndiye achayambuka ari pamberi pako,+ sezvakataurwa naJehovha. 4 Jehovha achaaitira sezvaakaitira Sihoni+ naOgi,+ madzimambo evaAmori, nenyika yavo, paakavatsakatisa.+ 5 Jehovha aaisa mumaoko enyu,+ munofanira kuaitira maererano nomurayiro wose wandakakurayirai.+ 6 Shingai, musimbe.+ Musatya kana kuvhunduka pamberi pavo,+ nokuti Jehovha Mwari wenyu ndiye ari kufamba nemi. Haazokuregii kana kukusiyai zvachose.”+ 7 Zvino Mosesi akashevedza Joshua, akati kwaari vaIsraeri vose vachizviona: “Shinga, usimbe,+ nokuti iwe—ndiwe uchapinza vanhu ava munyika yakapikirwa naJehovha kumadzitateguru avo kuti achavapa, uye iwe ndiwe uchavapa iyo kuti ive nhaka yavo.+ 8 Jehovha ndiye ari kufamba pamberi pako. Acharamba ainewe.+ Haazokuregi kana kukusiya zvachose. Usatya kana kuvhunduka.”+ 9 Mosesi akabva anyora mutemo uyu,+ akaupa vapristi vanakomana vaRevhi,+ ivo vatakuri veareka yesungano yaJehovha,+ nevarume vakuru vose vaIsraeri. 10 Mosesi akavarayira, achiti: “Panopera makore manomwe oga oga, panguva yakatarwa yegore rokusunungura,+ pamutambo wematumba,+ 11 vaIsraeri vose pavanouya kuzoona chiso chaJehovha+ Mwari wako munzvimbo yaachasarudza,+ uchaverenga mutemo uyu pamberi pevaIsraeri vose ivo vachinzwa.+ 12 Unganidza vanhu,+ varume nevakadzi nevana nomutorwa ari mukati memagedhi ako, kuti vateerere uye kuti vadzidze,+ nokuti vanofanira kutya Jehovha Mwari+ wenyu, vochenjerera kuita mashoko ose omutemo uyu. 13 Vanakomana vavo vasina kuziva vanofanira kuteerera,+ uye vanofanira kudzidza kutya Jehovha Mwari wenyu mazuva ose amuchagara panyika yamuchayambukira Jodhani kuti munoitora ive yenyu.”+ 14 Pashure paizvozvo Jehovha akati kuna Mosesi: “Tarira! Mazuva okuti ufe aswedera pedyo.+ Shevedza Joshua, mumire mutende rokusanganira, kuti ndimurayire.”+ Naizvozvo Mosesi naJoshua vakaenda, vakanomira mutende rokusanganira.+ 15 Jehovha akabva azviratidza patende ari mushongwe yegore, uye shongwe yegore yakamira pedyo nesuo retende.+ 16 Zvino Jehovha akati kuna Mosesi: “Tarira! Ucharara nemadzitateguru ako;+ uye vanhu ava vachasimuka+ voita unzenza navanamwari vokune imwe nyika vomunyika yavari kuenda kwairi,+ pakati pavo chaipo, uye vachandisiya+ voputsa sungano yangu yandakaita navo.+ 17 Ndichabva ndavatsamwira kwazvo pazuva iroro,+ ndichavasiya+ ndovavanzira chiso changu,+ uye vachava chinhu chinofanira kuparadzwa; matambudziko mazhinji nenhamo zvichavawira,+ uye nezuva iroro vachati, ‘Matambudziko aya haana kutiwira nokuti Mwari wedu haasi pakati pedu here?’+ 18 Asi ini ndichavanza chiso changu zvachose nezuva iroro nokuda kwezvakaipa zvose zvavanenge vaita, nokuti vanenge vaenda kune vamwe vanamwari.+ 19 “Zvino nyorai rwiyo urwu+ murudzidzise vanakomana vaIsraeri.+ Ruisei mumiromo yavo kuti rwiyo urwu ruve chapupu changu kuvanakomana vaIsraeri.+ 20 Nokuti ndichavaunza kunyika yandakapikira madzitateguru avo,+ inoyerera mukaka nouchi,+ uye vachadya,+ voguta, vokora+ uye votsaukira kune vamwe vanamwari,+ vachavashumira, vorega kundiremekedza, voputsa sungano yangu.+ 21 Zvino kana matambudziko mazhinji nenhamo zvikavawira,+ rwiyo urwu ruchavapindura sechapupu, nokuti harufaniri kukanganwika mumiromo yevana vavo, nokuti ndinonyatsoziva mafungiro avo+ avari kutanga kuita nhasi ndisati ndavapinza munyika yandakapika nezvayo.” 22 Naizvozvo Mosesi akanyora rwiyo urwu pazuva iroro, kuti arudzidzise vanakomana vaIsraeri.+ 23 Akarayira Joshua mwanakomana waNuni,+ akati: “Shinga, usimbe,+ nokuti iwe—ndiwe uchapinza vanakomana vaIsraeri munyika yandakavapikira,+ uye ini ndicharamba ndinewe.” 24 Zvino Mosesi paakanga angopedza kunyora mashoko omutemo uyu mubhuku kusvikira apera,+ 25 Mosesi akatanga kurayira vaRevhi, vatakuri veareka yesungano yaJehovha,+ achiti: 26 “Torai bhuku iri romutemo,+ muriise parutivi peareka+ yesungano yaJehovha Mwari wenyu, rive chapupu kwamuri.+ 27 Nokuti ini—ndinonyatsoziva kupandukira kwenyu+ nemitsipa yenyu yakaoma.+ Kana makapandukira Jehovha+ ini ndichiri mupenyu kudai, ndinemi nhasi, zvakadini kana ndafa! 28 Ndiunganidzirei varume vakuru vose vemadzinza enyu nevatungamiriri venyu,+ nditaure mashoko aya ivo vachinzwa, uye ndiite kuti matenga nenyika zvivapupurire.+ 29 Nokuti ndinonyatsoziva kuti kana ndafa chokwadi muchaita zvakaipa,+ uye muchatsauka panzira yandakakurayirai; uye muchawirwa nedambudziko+ panopera mazuva acho, nokuti muchaita zvakaipa pamberi paJehovha kuti mumugumbure nemabasa emaoko enyu.”+ 30 Zvino Mosesi akataura mashoko orwiyo urwu ungano yose yaIsraeri ichizvinzwa kusvikira apera:+